Igwe ọkụ dị ọnụ ala, kedu nke ị ga-azụta na 2022? Kpoo ọkụ maka obere ego
Igwe ọkụ dị ọnụ ala
Igwe ọkụ ọkụ dị ala
Igwe ọkụ seramiiki
Igwe ntụ oyi nwere ike ibugharị na mgbapụta ọkụ
Igwe ọkụ paraffin
Igwe ọkụ bụ ngwaọrụ na-eme ka okpomọkụ dị n'ime ụlọ ebe anyị na-edobe ya dịkwuo elu. Ọ na-enyere anyị aka ịna-ekpo ọkụ n’oge oyi. Enwere ọtụtụ ụdị stovu dabere na ya ụdị mmanụ ọkụ nke anyị na-eji na-amụba okpomọkụ.
Na post a, anyị ga-enyocha ụdị stovu niile dị na uru na ọghọm dị na nke ọ bụla. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ịmata ọnụ ahịa ma nweta ndị niile nwere àgwà ndị ọzọ na ọnụahịa dị mma.
Igwe ọkụ dị ọnụ ala kacha mma iji kpoo ụlọ gị n'oge oyi
Nke a bụ nhọrọ nke stovu kacha mma iji zere oyi na oyi. Na nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a, ị ga-eme nke ọma ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-ahọrọ ha ma bụrụ ndị nwere uru kacha mma maka ego:
Orbegozo BP 5007 -... Hụ atụmatụ 962 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Orbegozo BP 0102 - Igwe ọkụ ... Hụ atụmatụ 253 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Ihe kachasị amasị anyị
Orbegozo BB 5000 - Akụ ... Hụ atụmatụ 432 Nyocha Lelee nkwekọrịta
EKWESỊRỊ NKE OJI... Hụ atụmatụ 5 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Pellet stovu 14 kW ... Hụ atụmatụ 3 Nyocha Lelee nkwekọrịta
AVANT AV7554 - Igwe ọkụ ... Hụ atụmatụ 145 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Nke kacha mma	Orbegozo BP 5007 -...
Ọnụahịa mma	Orbegozo BP 0102 - Igwe ọkụ ...
Ihe kachasị amasị anyị	Orbegozo BB 5000 - Akụ ...
EKWESỊRỊ NKE OJI...
Pellet stovu 14 kW ...
AVANT AV7554 - Igwe ọkụ ...
na okpokoro pellet Ha na-agbasa kemgbe ọtụtụ afọ n'ihi arụmọrụ dị mma na arụmọrụ ha. Ọrụ ya dị mfe ma dị ọnụ ala. Igwe ọkụ ahụ nwere tank iji chekwaa mmanụ ọkụ, na nke a, pellet. Mgbe anyị tinyere ngwa ahụ n'ọrụ, ihe nkedo na-eme ka pellet banye n'ime ụlọ oku iji mee ka ọkụ na-agba ọkụ na ọnụego nke usoro nchịkwa eletrọnịkị na-egosi.
Pellet ndị ahụ na-ere ọkụ, na-ebunye ọkụ na uzuzu nke a na-agafe n'azụ azụ ebe ejikọrọ chimni dị n'èzí.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta stovu pellet, jiri ohere anyị nyere gị mee ihe.
Hụ stovu pellet
Otu n'ime uru ọ na-enye bụ ikike ịme ihe mmemme nke a na-agbanye stovu ahụ iji nye ọkụ n'ime ụlọ ma gbanyụọ ọzọ. Igwe ọkụ ndị a na-enwe mgbagwoju anya na stovu biomass, ebe ọ bụ na pellet dị ụdị mmanụ ọkụ biomass. Ọ na-agụnye sawdust compacted n'ụdị obere cylinders. N'ozuzu, kilogram abụọ nke pellet na-enye otu okpomọkụ nke otu lita diesel na-emepụta.
Ha bụ stovu ndị dị ọnụ ala taa. Mmanụ ya bụ biomass dị n'ime ọhịa. Ha dabere na stovu osisi ọdịnala nke ndụ, mana itinye teknụzụ kachasị elu. Nke a na-eme ka ojiji ya dịkwuo mma ma na-emeziwanye ọkụ ọkụ.
Ebe ọ bụ na mmanụ ụgbọala ha bụ ihe e kere eke na gburugburu ebe obibi, ọ naghị emerụkwa ahụ gburugburu. Ha zuru oke iji nweta ohere kachasị mma na okpomọkụ dị ọcha.
na osisi stovu ha bụ ndị kasị omenala. Ndị a bụ ngwaọrụ ndị na-eji osisi eme mmanụ. A na-enweta nkụ site na osisi. Ihe a na-ejikarị eme ya kwa ụbọchị bụ na kichin nke ime obodo, ọ bụ ezie na ọ na-enyekwa aka inye okpomọkụ na ịbawanye okpomọkụ nke ụlọ.
Dị ka ọ na-adịkarị, stovu osisi niile nwere ọkpọkọ nke na-ejedebe na anwụrụ ọkụ nke na-achụpụ gas ndị a na-emepụta na combustion na-enyere aka belata ohere nke iku ume ikuku.
Ha bụ stovu kachasị mfe iji na-enyekwu ntụrụndụ n'ihi mgbakwunye ụlọ nke ọkụ na-enye. Ọ nwere ike were ihe dị ka awa anọ maka ire ọkụ ahụ, mana ọ nwere ike idobe okpomọkụ nke ọma ruo ihe dị ka awa iri abụọ. Igwe ọkụ ọkụ na-ere ihe dị ka awa 9 na-enye okpomọkụ zuru oke maka otu abalị dum.
Ị nwere mmasị ịzụrụ stovu nkụ? Ebe ị ga-enweta ha dị ọnụ ala.
Hụ stovu ọkụ ọkụ
Osisi a na-eji ọkụ kwesịrị inwe obere iru mmiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ nọgide na-ere ọkụ ruo ogologo oge. Ka osisi na-akpọ nkụ, ngwa ngwa ọ na-ere ọkụ.
Enwekwara stovu osisi nwere oven iji nweta ohere nke ikpo ọkụ na-esi na ya sie nri ụfọdụ dị ka achịcha, pizzas, ụfọdụ skewers na skewers.
Nhazi nke mmanụ ọkụ gas na-enye ha ohere ịrụ ọrụ nke ọma. Mmanụ a na-eji eme ihe n'oge a ọ bụ butane gas. Ha na-enwekarị ịrụ ọrụ nke ọma. N'oge gara aga, ndị mmadụ na-atụ egwu ịzụrụ na iji mmanụ gas ma ọ bụ butane gas cylinders.
Otú ọ dị, ugbu a, ụdị stovu ndị a dị oke nchebe. Tụkwasị na nke ahụ, ha nwere ike ịmepụta ego ọzọ kwa ọnwa ma anyị nwere ike iji ya n'oge ọ bụla nke mberede.
Igwe ọkụ gas pụtara dị oke ọnụ ala. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọnụ ahịa kacha mma, echefula onyinye anyị.
Hụ stovu gas
Ọrụ ya dị nnọọ mfe. O nwere etiti ebe a na-etinye cylinder gas butane na ọkụ na-ahụ maka ijikwa ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ. N'oge usoro ahụ, a na-ere ọkụ butane gas na ikuku oxygen na ikuku ma na-enye okpomọkụ n'ime ụlọ ahụ.
Enwere ike ibugharị stovu ndị a n'otu ebe gaa n'ọzọ ngwa ngwa mgbe achọrọ ya (ọ bụrụhaala na agbanyụrụ ha). Ha dị mma maka ikpo ọkụ obere ụlọ, ebe ọ na-eme ngwa ngwa.
Paraffin afụnwu ọkụ
Ụdị stovu ndị a amachaghị nke ọma, mana ha na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ sistemu enwere ike ibugharị nke na-achọghị ụdị nrụnye na/ma ọ bụ mmezi ọ bụla. Mmanụ ya bụ mmiri mmiri (paraffin) ọkụ ya na-agbachikwa nkịtị.
Otu n'ime uru ya bụ ịdị mfe nke ibufe ha site n'otu ọnụ ụlọ gaa na nke ọzọ na ọsọ ọkụ ya. Tụkwasị na nke ahụ, okpomọkụ na-emepụta site na paraffin ọkụ ọ naghị etinye uche dị ka nke ọkụ eletrik, kama, a na-ekesa ya nke ọma gburugburu ụlọ ahụ. Nke a na-eme ka mmetụta nke nkasi obi na-enye ihe ka ukwuu.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ stovu paraffin ma ọ bụ kerosene n'ihi uru calorific dị elu na nchekwa ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta stovu paraffin, jiri ohere anyị na-enye.
Hụ stovu paraffin
E jiri ya tụnyere oriri nke stovu ndị ọzọ, stovu paraffin nwere obere oriri.
na Igwe ọkụ eletrik Ha bụ ngwaọrụ ndị na-eji ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ na-eguzogide ma na-amụba ọnọdụ okpomọkụ. Ha na-enye okpomọkụ kachasị dị ọcha na nke dị ọcha, ebe ọ bụ na ọ naghị emepụta ụdị ihe ọ bụla. Otu n'ime ihe ndọghachi azụ bụ mmụba nke ụgwọ ọkụ eletrik.
Ojiji nke stovu eletrik fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile na ha dị nnọọ mma ibufe site n'otu ọnụ ụlọ gaa na nke ọzọ na ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-aga njem. Otú ọ dị, ha adịghị mma n'ihe gbasara nchekwa ego, ebe ọ bụ na ha na-abawanye ụgwọ ọkụ eletrik nke ukwuu ma ọ bụrụ na a na-ejikarị ya eme ihe.
Igwe ọkụ eletrik na-adị mma mgbe niile iji kpoo ọnụ ụlọ n'oge. Ha dị ọnụ ala na obere arọ, ya mere ha zuru oke maka iji oge ụfọdụ.
Lee stovu eletrik
Ha dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya okpomọkụ n'otu ọnụ ụlọ ma ọ bụ abụọ ma ọ dịghị mkpa ka okpomọkụ gbasaa n'ime ụlọ niile nke ụlọ ahụ.
Mgbanwe dị iche iche ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ stovu
Iji họrọ otu ụdị stovu ma ọ bụ ọzọ, ọ dị mkpa iburu n'uche ọtụtụ ihe:
Ike ikpo ọkụ
Nke mbụ bụ ikike nke stovu na-emepụta okpomọkụ na ọnụ ala kacha nta. N'ozuzu, ka stovu na-enwekwu ike, otú ahụ ka mmanụ ọkụ na-esikwu ike ma ọ bụ ọkụ eletrik ọ na-eri (n'ihe gbasara stovu eletrik).
Iji mara ike calorific zuru oke nke stovu anyị, anyị ga-amata ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ụlọ ahụ. A na-atụ ike na kW. Onye ọ bụla kW nke ike nwere ike ikpo ọkụ 8 square mita Nke elu. Ya mere, ọ bụrụ na ụlọ gị dị 80 square mita, ike nke 10 kW ga-ezuru.
Nha ime ụlọ
Iji mara stovu kacha mma maka ọnọdụ gị, ọ dị oke mkpa ịmara ụlọ ebe a ga-eji ya eme ihe ma ọ bụ ebe a ga-etinye ya. Ọ bụrụ na isi ụlọ bụ 30 square mita, anyị ga-eji a dịtụ elu ike karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ 20 square mita. Iji kwalite ojiji nke stovu ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji data ntinye aka na kW nke a kpọtụrụ aha n'elu.
Ebe ebe stovu ahụ bụ ihe na-achọpụta arụmọrụ. Ọ bụrụ na ọnụ ụlọ ebe anyị ga-etinye ma ọ bụ tinye ya kacha mma, anyị ga-eji ya obere oge. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ nke kachasị oyi, anyị ga-edozi ụlọ ahụ iji belata oriri nke stovu.
Iji nwekwuo arụmọrụ nke stovu ahụ, gbalịa ịhọrọ ebe dị na akụkụ nke ụlọ ahụ nke nwere ihe mkpuchi dị mma karịsịa, nke mere na ọkụ si na stovu ahụ ghara ịla n'iyi site na mgbidi ma ọ bụ windo. Ọ dị mkpa ịhapụ ihe dịka 40 cm ohere n'etiti mgbidi na stovu ma ọ bụ ihe ọ bụla na-ere ọkụ iji zere ọkụ ọkụ.
Ọ dị ezigbo mkpa na ụlọ ebe anyị na-etinye stovu nwere usoro ikuku na-ekpo ọkụ na anwụrụ ọkụ iji zere oke okpomọkụ ma ọ bụ ihe ize ndụ ọkụ ọ bụla.
Windows na mkpuchi
Ọ bụrụ na ụlọ ahụ nwere ezigbo mkpuchi na windo nwere okpukpu abụọ, stovu ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma. Echefula ịpụ ogologo nke 30-40 cm n'etiti stovu na ihe ọ bụla nwere ike ire ọkụ.
Otu esi ahọrọ stovu
Ozugbo amatara mgbanwe niile a ga-echebara echiche, anyị nwere ike ịhọrọ stovu kacha mma maka anyị.
Igwe ọkụ osisi bụ ndị na-enye ọkụ na-arụ ọrụ kachasị elu na ọkụ ọkụ dị ọcha. Ha nwere ike na-agba ọsọ na mmanụ ọkụ nwere ike imegharị dịka ịkwachaa nkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ha nwere ihe eji achọ mma nke ọkụ na-enye anyị. O nwere ike inye anyị ikuku ụlọ nke anyị na-achọ. Enwere ọtụtụ ụdị iji mee ka ịchọọ mma nke kacha amasị anyị. N'ime uru ya, anyị na-ahụ nke ahụ achọghị ọrụ ọ bụla. Ha chọrọ naanị njikọ na mpụga maka oghere anwụrụ ọkụ.
N'aka nke ọzọ, a na-akwadebe stovu ndị e ji ígwè na ihe ndị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ iji kpoo oghere buru ibu karịa nkụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọkụ ngwa ngwa mana ọ na-adịte aka, họrọ stovu nke ejiri ihe nchara mee. Ọ bụrụ na ịchọrọ ikpo ọkụ na-adịte aka karịa, mana jiri nwayọ na mbụ. Họrọ osisi, biomass ma ọ bụ stovu pellet.
Ụdị ọkụ ọkụ kacha mma
Maka ụdị nkụ ọ bụla nwere ụdị nke na-enye arụmọrụ ka mma yana stovu dị mma.
Maka stovu osisi anyị na-ahụ ụdị ndị na-eduga dị ka Rocal, Carbel, Hergom na Bronpi.
Ọkụ Pellet nwere ụdị ama ama dị ka Lacunza, Ecoforest, Bronpi na Edilkamin.
Banyere stovu gas anyị na-ahụ ụdị dị ike dị ka DeLonghi na Orbegozo.
Maka stovu paraffin anyị nwere ụdị nwere ezigbo mma / ọnụahịa dị ka Qlima, Webber na Kayami.
Igwe ọkụ eletrik nwere ụdị ụdị dị iche iche dị iche iche, ebe ọ bụ na a na-ere ahịa ya. Anyị na-achọta ụdị kachasị mma dị ka Orbegozo, Clatronic, Rowenta, Klarstein, Thermic Dinamics, DeLonghi na Taurus.
Site na ozi a ị nwere ike ịhọrọ nke stovu kacha mma maka ọnọdụ gị ma chekwaa dị ka o kwere mee na ikpo ọkụ mgbe ị na-erite uru niile.
1 Igwe ọkụ dị ọnụ ala kacha mma iji kpoo ụlọ gị n'oge oyi
2 Ofdị stovu
2.1 Igwe ntụ oyi nwere ike ibugharị na mgbapụta ọkụ
2.2 Igwe ọkụ seramiiki
2.3 Igwe ọkụ ọkụ dị ala
2.4 Igwe ọkụ ọkụ ọkụ
2.5 Osisi nkụ
2.6 Bioethanol stovu
2.7 Pellet stovu
2.8 Osisi nkụ
2.9 Igwe ọkụ gas
2.10 Paraffin afụnwu ọkụ
2.11 Igwe ọkụ eletrik
3 Mgbanwe dị iche iche ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ stovu
3.1 Ike ikpo ọkụ
3.2 Nha ime ụlọ
3.5 Windows na mkpuchi
4 Otu esi ahọrọ stovu
5 Ụdị ọkụ ọkụ kacha mma
Maka oge oyi
Paraffin na mmanụ ọkụ
Pellet na stovu biomass
Igwe ọkụ dị ọnụ ala 2022 - Iwu nzuzo - Ozi gbasara kuki